Rita, Writing for My Sake!: ကျမ်း မကြေသူများ နှင့် Happy Birthday !
Posted by Rita at 12/16/2009 10:40:00 PM
အပေါ်အောက်ကို အောက်အပေါ် ပြောင်းထားတာ လေးစားပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် တစ်ပင်တစ်ပန်းလုပ်ဖူးလို့ သိတာပါ။
(အရီးကွန်စတိုင် လုပ်နေတာလား မသိဘူး။ တစ်ခါတည်း မန့်လို့ ပြိးနေတာကို နှစ်ခါလာမန့်နေတယ်။ အဟက်)
ငါဘယ်တုန်းကမှ ဉ နဲ့ ဥ မမှားဖူး ပါဘူး။ သိက္ခာချဖို့ပဲ စဉ်းစားမနေနဲ့ ခုနစ်တန်းကတည်းက မြန်မာကဗျာ ပထမဆု ရခဲ့တာ။ ငါမကြွားချင်ဘူးနော်။
အဲဒါဆိုရင် စိပုံးကို အပေါါ်အောက် ဒီဇိုင်းပြောင်းလုက်ိရမလား။
စာဒီဇိုင်းဆန်းသဗျ... အခုမှစရောက်တော့ စဖတ်ဖတ်ချင်း ဆန်းနေသလိုလို...း))).. ဆရာကြီး အီကြာကွေးလည်း ဆုံးပြန်ပြီနော်.. ဒီနှစ်အတွင်းတော့ ဆုံးတဲ့ ပညာရှင်တွေ အများကြီးပဲ... စိတ်မကောင်းစရာပဲ....
ချွန်တွန်း လုပ်သွားသူက “ STY ” ပါ။
သူလည်း အခုတော့ ကြေ သွားရှာပါပြီ
ပေါက်ဖော်ဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်း ပေါက်ပြီးမှ လာဖော်ပြန်ပြီ
18 Dec 09, 15:19
ပေါက်ဖော်: ဟိုမှာ..သက်သက်မဲ့ကို ဝင်ရောပြီးတော့..စ နေတာပါ.ပျော်ရွှင်ပါစေ.ဆီချက် လေး.။
Rita: ကျေးဇူး ပေါက်ဖော်။ ပြန်လာခဲ့ပါဦး။ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ဟာကို။ ပေါက်ဖော်သွားတော့ NN က မေးနေသေးတယ်။ လွမ်းလို့ ကျန်ရစ်ခဲ့မှာကို အားနာပါတယ် NN လို့ ကိုယ်ပြောပေးလိုက်တယ်။
သုူငယ်ချင်းစီသွားကြည့်သေးတယ။် စီပုံးမထား ကွန်မက် မရှိ. ဘယ်လိုလူလဲ။
ဘိရုမာလိုလည်း မရေးဘူး၊ ဗြစ်တစ်သျှလိုတွေ မှုတ်ထားတယ်။